Antenimiera: miandry ny fivoriana ara-potoana ny momba ireo depiote migadra | NewsMada
Antenimiera: miandry ny fivoriana ara-potoana ny momba ireo depiote migadra
“Raha ohatra ka ao anatin’ny fivorian’ny solombavambahoaka amin’ny fotoana ara-dalàna no tsy afa-miseho raha mbola voatazona izy ireo: amin’izay fotoana izay vao tokony hangataka any amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny filohan’ny Antenimierampirenena hilaza hoe banga ny toerana.”
Izay ny fanazavan’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine, momba ireo solombavambahoaka roa izay mbola any am-ponja miandry fotoam-pitsarana amin’izao fotoana izao. Raha tsiahivina: eo ny solombavambahoaka isany, Rasolomampionona Hasimpirenena (IRD), voafidy tany amin’ny distrikan’i Fandriana; Raveloson Ludovic Adrien (Tsy miankina Leva), voafidy tany amin’ny distrikan’i Mahabo.
Amin’izao fotoana izao, tsy manao fivoriana ara-potoana ny Antenimierampirenena. Miandry ny fivoriana ara-dalàna na ara-potoana izany ny filohan’ny Antenimierampirenena. Koa raha amin’izay ireo solombavambahoaka roa ireo no tsy manatrika ny fivoriana mandritra ny 60 andro manontolo, aorian’izay vao azo dinihina sy heverina ny fahabangan-toerana.
Azo ahitsy ny isan’ny vaomiera parlemantera
“Raha ny isan’ny vaomiera parlemantera, raha jerena ireo firenena efa mandroso: arakaraka izay mampilamina ny eo anivon’ny Antenimierampirenena ny firindrany”, hoy izy momba ny isan’ny vaomiera parlemantera mbola mahatratra 32 amin’izao, raha efa nihena ho 22 ny isan’ny minisitera.
Raha apetraka ny foto-kevitra hoe arakaraka ny isan’ny minisitera no tokony ho isan’ny vaomiera parlemantera ao amin’ny Antenimierampirenena, nefa jerena ihany koa izay tokony hampandeha sy hampisy filaminana mandrakariva eo anivon’ny Antenimierampirenena.
Azo atao ny manarina na mikitika an’io mba hampisy filaminana, araka ny fanazavany. Hijery ny fitsipika anatiny no anisan’ny anton’ny fivoriana amin’izao fotoana izao.